Izindaba - I-Fruit Blossom Tea Efficacy
Ukusebenza Kwetiye Yezithelo
Vumelanisa Ubende Nesisu
Umpe wezimbali waseJalimane uqukethe inani elikhulu likavithamini C, futhi izithelo nezimbali ezahlukahlukene zinezici zazo. Phakathi kwabo, amagilebhisi amnandi ngokunambitheka, i-dao izolile emvelweni, yondla isibindi nezinso, yondla i-qi negazi, ikhuthaza uketshezi lomzimba, ikhuthaza ukuchama; Ama-papaya nama-citrus peels agaya ukudla futhi aqinise isisu, andise isifiso sokudla; Imbali ye-rose inokunambitheka okumunyu, ipholile emvelweni, isusa ukushisa nomswakama, iqeda umoya, ikhuthaza ukujikeleza kwegazi, futhi iqeda ubuthi; I-rose inokunambitheka okumnandi, imvelo efudumele, ikhuthaza i-qi futhi iqeda ukucindezeleka, futhi iqeda izinhlungu ngegazi. Imiphumela ehlukahlukene yehlukile, konke lokhu kuhlobene nokulawula i-qi yobende nesisu.
Imbali yetiye lembali ingalapha imikhuhlane. I-vitamin C esebenzayo equkethwe yetiye uqobo. UVitamin C angathuthukisa amasosha omzimba futhi aqinise amandla omzimba okumelana nezifo. Ukuphuza inkomishi yetiye yezithelo empeleni kufana nokuphuza inkomishi yejusi entsha. EJalimane, abanye abantu bavame ukusebenzisa umpe wezimbali njengendlela yokusiza ekwelapheni izifo ngezidakamizwa, becabanga ukuthi kungasinciphisa isifo.
Imbali yezimbali yenziwa ngezithelo ezinezimbali netiye, kanti kuthiwa inomlando wamakhulu eminyaka. Ngokuvamile abaseYurophu bathanda ukuphuza ikhofi, kodwa kumaJalimane, itiye lembali nembuzi liyingxenye ebalulekile yokudla kwabo. Hhayi kuphela asebekhulile baseJalimane abathanda ukuwaphuza, kepha nabesifazane baseJalimane babheka le tiye njengomkhiqizo obaluleke kakhulu wobuhle.
Kukhona ukunambitheka okuningi okufana neParis Champs, isithandwa esingavinjelwe, iphupho eligcwele, i-hibiscus emanzini, isitayela saseYurophu, intokazi enhle, ihlathi elimnyama, umuzwa wehlobo, uthando lwe-blueberry, njll. Izithelo ezinothile zinuka kamnandi.
Imbali nethafa lezithelo elihlanzekile lihlukaniswe laba ukunambitheka okungu-4: IParis Champs, iBlue Melancholy, Isithandwa Esingavinjelwe, iPurple House Magic Medicine, konke kunezinzuzo zazo kwezokwelapha.
Itiye elibizwa ngokuthi umpe wezimbali lisuselwa enzalweni yezithelo nezimbali kanye namaqabunga omuthi waseChina njengezinto eziyinhloko, ezilungele ama-rhizomes neminye imithi yamaShayina. Yimiphumela emisha nemisha, enempilo, futhi engeyona enobuthi kanye nemiphumela engemihle.